Polo - Noti Caballos | Soavaly Noti
Polo dia fanatanjahantena nananganana ekipa roa isaky ny mpilalao efatra ary mitaingina soavaly dia manandrama mifaninana haka baolina hazo na plastika kely mifandraika amin'ilay faritra, manoloana ny tanjon'ny mpifaninana aminy. Toy ny baolina kitra mitaingina soavaly io.
Ao amin'ity habakabaka ity Ho hitanao ny zava-drehetra mifandraika amin'ity fanatanjahantena ity, ekipa, ligy, valiny, soavaly, torohevitra sy antsipiriany hafa hankafizanao bebe kokoa an'ity fanatanjahantena tsara tarehy ity.
Heverina ho fanatanjahantena kilasy ambony ny ankamaroany. Saingy amin'izao fotoana izao dia ampiharina amin'ny ambaratonga rehetra, raha mbola tia soavaly sy ity fanatanjahan-tena ity, na dia toa tsy mendrika aza izany, dia ambaratonga tsara tanjaka ara-batana sy fifehezana amin'ny soavaly, eto dia azonao atao ny mahita ireo toetra fototry ny polo.
Mikarakara soavaly Polo
Ny soavaly Polo dia biby tena karakarain'ny tompony, mazàna ny mpilalao amin'ity fanatanjahan-tena ity dia manana ...